UHenry Clay: I-Biography ye-19th Century Political Figure
Imbali kunye neNkcubeko Amanani obalulekileyo embali
Unamandla kunazo zonke wezopolitiko waseMerika ongazange akhethwe nguMongameli
UHenry Clay wayengomnye onamandla kunye namaPolitiki abalulekileyo eMelika ekuqaleni kwekhulu le-19. Nangona akazange akhethwe ngumongameli, waba nomthelela omkhulu kwi-Congress ye-US.
Amanqaku e-oratorical ayengummangaliso, kwaye ababukeli babeza kumisa eKapitol xa kwaziwa ukuba uya kunika intetho phantsi kweSénate. Kodwa ngelixa wayengumholi wezopolitiko ozithandayo kwizigidi, i-Clay nayo yayibangelwa ukuhlaselwa kwezopolitiko ezinobungozi kwaye waqokelela ezininzi iintshaba ngenxa yesikhundla sakhe eside.
Ukulandela ingxabano yeSeneti ngo-1838 malunga nokugqithiswa kokuphela kobukhoboka, uClay uthetha ngokuthethiwa kwakhe okudumileyo: "Ndingathanda ukuba ube ngumongameli."
Ubomi bokuqala bukaHenry Clay
UHenry Clay wazalelwa eVirginia ngo-Apreli 12, ngo-1777. Intsapho yakhe yayinempumelelo kwimimandla yabo, kodwa kwiminyaka kamva, kwavela isiganeko sokuthi uClay wakhulela kubuhlwempu.
Uyise kaClay wafa xa uHenry eneminyaka emine ubudala, kwaye unina waphinde watshata. Xa uHenry engumfana osetsheni waya kwintshona eKentucky, uHenry wahlala eVirginia.
Umgubo ufumene umsebenzi osebenzela igqwetha eliphambili eRichmond. Wafunda umyalelo ngokwakhe, kwaye eneminyaka engama-20 washiya iVirginia ukuba ahlangane nentsapho yakhe eKentucky kwaye aqalise umsebenzi njengommeli wezomda.
Umkhwa waba ngummeli ophumeleleyo eKentucky, kwaye wanyulwa kwi-legislature yaseKentucky eneminyaka engama-26. Emva kweminyaka emithathu waya eWashington okokuqala ngqa ukugqiba isigama senene evela eKentucky.
Xa i-Clay yokuqala ijoyina i-Senate yase-US yayiseneminyaka engama-29, incinci kwimfuneko yoMgaqo-siseko ukuba i-senators ibe neminyaka engama-30 ubudala. EWashington ka-1806 akukho mntu wayebonakala ebona okanye enakekele.
UHenry Clay ukhethwa kwiNdlu yabameli be-US ngo-1811. Wayebizwa ngokuba ngumthethi-ntloko wendlu kwiseshoni yakhe yokuqala njengendibano yebandla.
UHenry Clay waba ngumlomo weNdlu
Umkhwa waphenduka indawo yesithethi sendlu, eyayininzi imikhosi, ibe kwindawo enamandla.
Ngaphandle kwezinye i-congressmen, iClay yayifuna imfazwe neBrithani njengoko kwakukholelwa ukuba i-United States inokubamba iCanada kwaye ivule indlela yokunyuka kwintshona.
Iqela leClay laziwa ngokuba yiWar Hawks .
I-Clay yanceda ukukhupha iMfazwe ye-1812, kodwa xa imfazwe ibonakalisa ixabiso, kwaye ingenanto, yaba yinxalenye yeendwendwe ezazixoxisana noMnqophiso waseGhent, owawuphelisa ngokusemthethweni imfazwe.
I-American System ye-Henry Clay
Umkhwa wawubonile, ngelixa uhamba ukusuka eKentucky ukuya eWashington kwiindlela ezibi kakhulu, ukuba i-United States kwafuneka ibe nendlela yokuthutha engcono xa ithembele ukuqhubeka njengoluhlanga.
Kwaye kwiminyaka eyalandela iMfazwe ye-1812 Clay yaba namandla kakhulu kwi-Congress yase-US, kwaye yayihlala ikhuthaza oko kwaziwa ngokuba yi- American System .
UHenry Clay noBakhoboka
Ngomnyaka we-1820, Impembelelo yeClay njengesikhulumi sendlu yanceda ukuzisa i- Compromise yaseMissouri , yokuqala yokungqubuzana eyayifuna ukuxazulula imbambano yobukhoboka eMelika.
Iingcamango zombala kwibukhoboka zazinzima kwaye zibonakala ziphikisana.
Wayebiza ukuba akachasene nobukhoboka, kodwa wayenamakhoboka.
Kwaye kwiminyaka emininzi wayeyinkokheli yoMbutho wamaMerika waseMelika, umbutho wabantu baseMerika abavelele ababefuna ukuthumela ama-slave akhululekile ukuba abuyele eAfrika. Ngelo xesha umbutho wabonwa njengendlela ekhanyisiweyo yokuzisa ekugqibeleni ekugqilazweni eMelika.
Ukudla kwakudla ngokukhawulwa ngendima yakhe ekuzameni ukufumana ukunyaniseka kwimiba yobukhoboka. Kodwa iinzame zakhe zokufumana oko wayecinga ukuba yindlela efanelekileyo ekugqibeleni ekugqibeleni ubugqila kwakuthetha ukuba waxhatshazwa ngabantu ngaphesheya kombandela, ukususela kwi- abolitionists eNew England ukuya kutsho eMzantsi.
Indima yoKhetho kwiNyulo ye-1824
UHenry Clay wagijima waya kumongameli ngo-1824, waza wagqiba wesine. Unyulo lwalunalo luhlu olucacileyo lokunyulo lweekholeji, ngoko umongameli omtsha wayenokumiselwa yiNdlu yabameli.
Ukudla, esebenzisa impembelelo yakhe njengesithethi sendlu, waphonsa inkxaso yakhe kuYohn Quincy Adams , owawunqoba ivoti eNtendeni, ehlula uAndrew Jackson
I-Adams yabizwa ngokuba nguClay njengobhala wayo. UJackson kunye nabalandeli bakhe bacaphukile, kwaye baxelelwa ukuba i-Adams kunye neClay yenze "inzuzo engcolileyo."
Ihlawuliso yayingenasiphelo, njengokuba uClay wayengathandeki kakhulu ngoJackson kunye nezopolitiko zakhe, kwaye wayengeke afune isicengelelo somsebenzi ukuxhasa i-Adams phezu kweJackson. Kodwa ukhetho luka-1824 lwahla kwimbali njenge -Corrupt Bargain .
U-Henry Clay Ran Ngokuba uMongameli amaxesha amaninzi
U-Andrew Jackson ukhethwe ngumongameli ngo-1828. Ekupheleni kwekota lakhe njengobhala wenarha, uClay ubuyela kwifama yakhe eKentucky. Ukuthatha umhlala phantsi kwakhe kwizepolitiki kwakumfutshane, njengoko abavoti baseKentucky bamkhethele kwiSenate yase-US ngo-1831.
Ngowe-1832 Umkhwa wagijima waya kumongameli kwakhona, waza wahlulwa ngu-Andrew Jackson. Umkhwa waqhubeka nokuchasa uJackson esikhundleni sakhe njengenkulunga.
Umkhankaso olwachasa uJackson Clay we-1832 ngowokuqala kweQela le-Whig kwizopolitiko zaseMelika. Umbulali wafuna ukutyunjwa kuka-Whig kumongameli ngo-1836 no-1840, zombini amaxesha alahlekelwa nguWilliam Henry Harrison , ekugqibeleni wamnyulwa ngo-1840. UHarrison wafa emva kwenyanga nje eofisini, waza watshintshwa ngu-vice-president wakhe, uJohn Tyler .
Umkhwenkco wacatshulwa ezinye zezenzo zikaTyler, waza wasuka kwi-senate ngo-1842 waza wabuyela eKentucky. Wagijima wabuyela kumongameli ngo-1844, elahlekelwa nguJames K. Polk . Kubonakala sengathi uye wabashiya kwezopolitiko ngokulungileyo, kodwa abavoti baseKentucky bamthuma kwi-senate ngo-1849.
UHenry Clay Ucatshangelwa Omnye wabaSenenkulu kakhulu
Udumo lweClay njengowomthetho omkhulu usekelwe kwiminyaka emininzi kwi-Senate yaseUnited States, apho wayeyaziwa ngokunikela iingxoxo eziphawulekayo. Ephantse ekupheleni kobomi bakhe, wayebandakanyeka ekudibaniseni i- Compromise ye-1850 , eyayikunceda ukubamba iNyunyana kunye nokuxhatshazwa ngokugqithisa.
Ukufa kwafa ngomhla ka-Juni 29, 1852. Iingqungquthela zeCawa zaphela ngaphaya kweUnited States zatshitshiswa, kwaye isizwe sonke sazila. I-Clay yayiqokelele abancedisi bezopolitiko abangenakubalwa kunye neentshaba ezininzi zezopolitiko, kodwa amaMerika ngexesha lakhe aqonda indima yakhe ebalulekileyo ekulondolozeni iManyano.
Iinkokheli zePalam Panther Party
UFrederick Douglass: U-Abolitionist kunye noMmeli wamalungelo amabhinqa
UJoseph Baker: Ukunyanzelwa kweFransi kunye ne-CIvil Rights Movement
UDaniel Webster: Iinkcukacha ezibalulekileyo kunye ne-Biography efutshane
UFlorence Mills: Umenzi wamazwe ngamazwe
I-Biografi yoMdabu Omnyama uCarter G. Woodson
UWilliam Lloyd Garrison
UFrankie Muse Freeman: I-Attorney yamalungelo oluntu
Biography ka-Alexander Hamilton
Indlela yokusebenzisa 'Reír' ne 'Reírse'
Ngaphambi kokuba Uthenge Izipho Zomhlobo Wakho Oyingokomoya
Lithini IBhayibhile Ngokuya Kwicawa?
I-Andrews University GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Ukudumisa Ukungazi kakuhle nguBertrand Russell
Ukucwangciswa (ukubunjwa kunye neengxelo)
Indlela yokutshaya i-CD engabonakaliyo
Yintoni iDiagenesis kwiGeology?
I-Crazy Muthas: I-Scary Horror Movie Mothers
Iipropati zeIonic kunye neCovalent Compounds
Umsindo kunye nokuHlanganisa kwiintlobo ezahlukeneyo zoNxibelelwano
I-Showa Era eJapan
Imimiselo yeKlasi yeeKlasi eziNgcono, eziPhezulu, ezicacileyo
Biography kaSue Monk Kidd